सुजुकीको बेजोड अफर – Rajmarg Online
सुजुकीको बेजोड अफर
घोराही १८ चैत्र । सुजुकी बाइकको आधिकारिक वितरक भिजी अटोमोबाइल्सले नया वर्ष २०७६ को उपलक्ष्यमा नया अफर ल्याएको छ । बाइक तथा स्कुटरको खरिदमा १० हजार छुट रहेको र हरेक हप्ता बम्परमा एक जनालाई ५० हजार पक्का उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको एम.एस. अटोका सञ्चालक माधव योगीले जानकारी दिनुभयो । सुजुकीले अन्य विभिन्न मोडलका बाइक तथा स्कुटर उपलब्ध गराउनुका साथै पछिल्लो समयमा बर्गम्यान स्कुटर समेत उपलब्ध गराएको छ ।
यस अन्तर्गत सुजुकीको इन्ट्रुडर मोटरसाइकलको खरिदमा थाइल्याड घुम्न जाने सुनौलो अवसर पाउने भएका छन । भिजी अटोमोबाइल्सको आधिकारिक बिक्रेता घोराहीमा रहेको एम.एस. अटोका सञ्चालक माधव योगीले सुजुकीको इन्ट्रुडर मोटरसाइकलको खरीद गर्ने प्रत्येक ग्राहकले थाइल्यान्ड घुम्न जान पाउने बताउनु भयो । साथै थाइल्याड जान नचाह्ने ग्राहकका लागि ४३ इन्चको टिभी उप्लब्ध रहेको बताउनु भयो |
साथै नेपाल मै पहिलो पटक सुजुकी मोटरसाइकल खरीद गर्ने ग्राहकहरुलाई सित्तैमा विदेश घुमाउन लैजाने भएको जानकारी दिनुभयो । जापनिज कम्पनीको उत्पादन हुनुका साथै धेरै नै बलियो पार्टपुर्जा समेत भएकाले ग्राहकले सुजुकी ब्रान्डलाई नै विश्वास गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।